Hotels and Airlines Claim Deep Cleaning: What Does It Mean? | Safety
Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovaon'ny seranam-piaramanidina • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny dia an-tserasera • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Tombontsoa fampiasam-bola • Other • fanarenana ny dia • Safety • Vaovao momba ny fizahantany • Vaovao momba ny fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News
Ny hotely sy ny seranam-piaramanidina dia mitaky fanadiovana lalina: inona no dikan'izany?
Oktobra 15, 2020
Home » Lahatsoratra » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Ny hotely sy ny seranam-piaramanidina dia mitaky fanadiovana lalina: inona no dikan'izany?
Nandalo Baby Boomers, Generation X, ary ireo Arivo Taona isika; ankehitriny ny fifantohana amin'ny marketing dia ny fanadiovana lalina miaraka amin'ny Generation Clean. Ny olona dia miahiahy mafy amin'ny fahasalamany sy ny fiarovana azy ireo hatramin'ny Fanafihana COVID-19. Ity fifantohana ity dia ary hisy fiantraikany hatrany ary hanova ny fandraisam-bahiny, fitsangatsanganana sy fizahan-tany orinasa. Ny tsy fahaizanao manome toky tontolo iainana tsy misy ahiana dia manemotra ny famerenana indray ny indostria ary mitazona ny olona ho akaiky ny tranony, ny fiara, ny bisikileta ary ny toeram-pisakafoanana ho an'ny mpifanolobodirindrina aminy, fa ireo orinasa manamboatra savony, mpanadio tanana ary taratasy fidiovana dia sahirana manisa. ny haren'izy ireo hatrany amin'ny banky.
Vao tafaverina avy teny an-tongotra kely namaky ny zaridainam-pokonolona aho dia nahatsikaritra fa ny lehilahy sy ny vehivavy toa 60 taona no ho miakatra, dia nihatakataka tamim-pitandremana (raha tsy hoe mpivady izy ireo… ary avy eo nihazona azy mandra-pahafatiny), raha ny olon-dehibe rehetra (amin'ny fisehoana) dia nanao picnika, namihina, nanoroka, nilalao tamin'ny zanany, ary, tamin'ny ankapobeny, nankafy tolakandro mahafinaritra.
Fahasarotana amin'ny fahadiovana
Ny fanadihadiana nataon'ny mpanjifa CODID-19 an'ny GlobalData dia nahatsikaritra fa ny 85 isan-jaton'ny valinteny manerantany dia miahiahy fatratra na somary miahiahy momba ny valan'aretina manerantany. Ny fanamby amin'ny famonoana otrikaretina sy fanadiovana ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ny hotely, ny toeram-pivoriana, ny toerana ho an'ny daholobe, ny toeram-pisakafoana, ny tobim-pahasalamana ary ny spa dia mety hampatahotra. Ny fomba hamaritana ny fenitra amin'ny politika momba ny fahadiovan'ny hotely izay hanomezana fahafaham-po ny filan'ny vahiny sy ny hetahetany dia tsy mora satria ny torolàlana dia miainga avy amin'ny tolo-kevitra momba ny famafazana Lysol sy ny famaohana tanana ka hatramin'ny fikarakarana andiam-robot misy jiro ultraviolet ary hamakivakiana ireo efitrano sy lalantsara tsindraindray.
Mandehana aloha ianao
Raha ny fikarohana nataoko tsy ara-tsiansa tanteraka dia ny filokana ho ahy dia ny Gen Z sy ny Millennial dia, raha vantany vao miverina ny asany (na mahita asa vaovao) no voalohany haka fiara manofa, bisikileta na moto ary mitarika ny sain'izy ireo fialantsasatra naharitra ela, manomboka amin'ny ski amin'ny tehezan-tendrombohitra, mitsangatsangana amin'ireo havoana ary milomano eny amoron'ny morontsirak'i Florida ka hatrany amin'ny morontsirak'i Long Island.
Afaka volana (na lava kokoa) vao manomboka hatoky ny "fahadiovana" amin'ny fitateram-bahoaka, ny lamasinina ary ny zotram-piaramanidina ny Boomers (sy ny lava kokoa) ary hino ny fisavoritahana momba ny rafi-pahasalamana sy fidiovana avo lenta izay heverina fa hita eny amin'ny seranam-piaramanidina, hotely ary toerana manintona.
Raha namerina namaritra ny famaritana an'habakabaka ny madio ianao dia mety ho hitanao fa ny fahatakaranao ny madio, ny fahadiovana ary ny azo antoka dia hafa be noho izy ireo. Izany dia midika hoe fanakanana lehibe amin'ny sidina, ary fisalasalana lalina momba ny fijanonana any amin'ny hotely na fisakafoanana any amin'ny trano fisakafoanana.
Nianatra momba ny madio avy amin'i Etta Reny aho. Nampianariny ahy ny mahasamihafa ny madio sy ny Clorox madio, momba ny zavakanto manasa ny gorodon'ny fandroana amin'ny alema-by, fikosehana koveta fandroana, fanasana lamba fidiovana sy karipetra ary fomba hahazoana tara-pahazavana amin'ny vata fampangatsiahana sy lafaoro. Tsy nandany fotoan-tsakafo mihitsy izahay tamin'ny fanaovana sakafo maraina, ny sakafo antoandro dia matetika makaroni sy fromazy (boaty iray manontolo), raha ny sakafo hariva kosa dia zanak'ondry may nodorana vita tamin'ny gilasy sôkôla iray litatra; na izany aza, nandany fotoana be tamin'ny fanaovana fandriana izahay, nanasokajy ny fanasan-damba, ny ba kiraro, ary ny fanosotra vy tamin'ny pataloha sy ny lambam-paty.
Ka - manohitra ny mpikarakara trano fandraisam-bahiny na mpitantana fikojakojana ny seranam-piaramanidina aho hanontany ahy raha afaka manavaka ny fahasamihafana lalina, ny madio na ny maloto… Manana diplaoma avo lenta miampy traikefa am-polotaona maro aho, ary fantatro fa madio rehefa mahita an'io.
Vao tsy ela akory izay no nijery horonantsary fampiroboroboana momba ny programa fikolokoloana zotram-piaramanidina iray izay nanaovan'ny talen'ny serasera serasera (tsy olona manana fiaviana amin'ny fahadiovana na siansa) ny fahadiovan'ny zotram-piaramanidina, raha mampiseho ny horonantsary momba ny ekipa mpanadio, eny ambony fiaramanidina, mampiasa ilay lamba mavo iray ihany hanadio ny faritra maro amin'ny mpandeha sy ny habakabaka! Ny fijerena fotsiny ilay horonantsary dia nahatonga ahy hanamarika fa tsy hiditra amin'ity fiaramanidina ity aho raha tsy hoe fonosina am-pilaminana ao anaty kitapo plastika mitafy sarontava tarehy sy ampinga, miaraka amin'ny fonon-tànana fanadiovana dakozia be adidy eny an-tanako.
Ny tsy fitoviana eo amin'ny fanadiovana sy ny famonoana otrikaretina
Ny fanadiovana dia manala ny loto sy loto maloto ao anatin'izany ny mikraoba avy amin'ny habakabaka; na izany aza, ny fanadiovana irery tsy mahafaty mikraoba; hamonoana ny buggers dia ilaina ny mamono otrikaina amin'ny fampiasana akora simika. Ny famonoana otrikaretina dia tokony ampiasaina mandritra ny fanadiovana ary ampiharina amin'ny fomba mahomby amin'ny alàlan'ny famafazana herinaratra, fogger ary zavona mba hahazoana antoka fa tratra ny faritra ambonimbony. Ny famonoana otrikaretina dia tokony hampiasaina hanasana lamba firakotra sy lamba famaohana ary fitafiana ihany koa fa ny lamba firakotra sy ny lambam-pandriana dia mila toerana mafana indrindra ary maina tanteraka.
Araka ny filazan'ny Molly Maid.com, ny Deep Cleaning dia mitaky fitaovana manokana, manomboka amin'ny lamba malaso sy koba fikosoham-bary ka hatramin'ny siny 2 (rano maloto / madio), degreaser, savony lovia ary famafazana otrikaina, fonon-tànana vita amin'ny fingotra, tavoahangy misy vinaingitra sy rano ary miborosy borosy. Ny fizotrany dia misy ny vovoka sy ny fako amin'ny zava-drehetra manomboka amin'ny sisin-dambam-baravarankely ka hatramin'ny jiro fametahana sy ny tampon'ny kabinetra (fampiasana tsara ny tohatra).
Mba hahalavorary azy io, dia tokony hoheverinao ny iray amin'ireo mpanadio banga tsara indrindra Unclutterer, izay hanampy anao hanadio tsara ny efitrano rehetra amin'ny fiezahana kely indrindra.
Faucets sy showerheads dia hafafiny amin'ny vinaingitra sy rano, esorina ny fonon'ny ventin'ny HVAC ary hosasana amin'ny rano savony mafana; ny varavarankely sy ny efijery dia noroahina ny kongona sy ny bibikely; soloina ireo mpankafy valindrihana; ny karipetra nesorina tasy; ny varavarana sy ny tolam-baravarana dia voafafa noho ny fanosihosena sy ny dian-tànana; lapoana fako dia voafafa sy voadio.
Ny hotely sasany dia mampiasa teknolojia hitondra ny famaritana ny madio amin'ny taonjato faha-21 miaraka amin'ny fampidirana robot. Ny trano fandraisam-bahiny Westin Houston Medical Center dia mampiasa robot LightStrike Germ-Zapping Robots (Xenex Disinfection Services) miaraka amina vidiny $ 100,000 isanisany. Ireo milina dia mamoaka hazavana ultraviolet misitatra hanaparitahana viriosy sy bakteria ao anatin'ny minitra vitsy. Ny orinasa dia natomboky ny epidemiolojika roa ary ny fomba siantifika no namorona ny fototry ny teknolojia ary ampiarahina amin'ny fampiharana sigma enina hampihenana ny tahan'ny aretina.
Ny tanjona madio dia tsy ampy
Tsy azo atao ny mametaka toerana an-dàlam-bolo raha hamaritana raha voan'ny otrikaretina izy. Na izany aza, noho ny siansa sy ny haitao, misy fomba vaovao ahafahana mamantatra ireo faritra madio / maloto amin'ny alàlan'ny fampiasana rafitra mari-pamantarana fluorescent tsy hita maso izay mikendry ireo faritra manodidina ny mpanjifa akaiky.
Talohan'ny fampidirana ny famakiana marika fluorescent avy amin'ny farafahakeliny 30 sy zavatra ao anaty efitrano iray dia nanambara fa ny 11 isan-jaton'ny lasibatra ihany no nodiovina. Miaraka amin'ny fiofanana, fidirana an-tsehatra amin'ny fanabeazana, fanamafisana, famoronana tontolon'ny fanovana ary fanekena, ny mpiasa dia afaka nanatsara ny teknikan'ny fanadiovana azy ireo hahatratra 77 isan-jaton'ny fahadiovana araka ny filazan'i Wai Khuan Ng tamin'ny fikarohana nataony, "Ahoana ny fahadiovana: fomba vaovao hanombanana sy manatsara ny fanadiovana ny tontolo iainana… ”
Hotely, mpanjifa ary madio
Azo inoana fa hisy robot hafa hampidirina ao amin'ny eco-system hotely? Ny fikarohana nataon'i Shi Zu, Jason Stienmetz ary Mark Ashton (International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2020) dia nijery ny fampiasana robots amin'ny serivisy sy ny andraikitr'izy ireo amin'ny fitantanana hotely. Hitan'i Dr. Xu fa, "Mirongatra ny fampiharana ny robots amin'ny serivisy eo amin'ny sehatry ny hotely. Miaraka amin'ny antony fanampiny ilana hanomezana toky ireo mety ho vahiny fa ny fijanonany dia hifanaraka amin'ny fifandraisana ara-tsosialy faran'izay kely sy ny fifandraisan'olombelona, ​​dia azo atao haingana kokoa izany. " Rehefa misaintsaina ireo fanamby amin'ny fanokafana indray ny fananany ireo mpitantana hotely ary tena mila «fanombohana vaovao», ny fientanentanana hampiditra robot ao amin'ny faritry ny asa ary hanafaingana ny fahazoana ny teknolojia robot dia azo antoka.
Mitady madio ny mpitsangatsangana
Tsy azo inoana fa ny fiantsoana trano fandraisam-bahiny dia hiteraka torolàlana maharitra amin'ny fomba fidiovan'izy ireo. Ny famoahana gazety dia azo antoka fa tsy kendrena ary azo inoana fa hampiditra ankapobeny sy fanambarana manjavozavo momba ny fanarahana ireo torolàlana napetraky ny Center for Disease Control (CDC).
Satria tsy misy fomba ahafahan'ny vahiny mamantatra ny marina na ny maha-marina ny vaovao navoaka ary raha toa ka tsy safidy azo atao ny mijanona ao an-trano na manofa RV na manangona tranolay, inona no tokony hataon'ny mpandeha?
Diovy ny tenanao
Misafidiana hotely manolotra famandrihana tsy misy ifandraisany, fizahana ary efitrano fandraisam-bahiny. Mifandraisa amin'ny trano fandraisam-bahiny mba hahitana raha azo ampiasaina amin'ny telefaona findainao sy ny takelakao ny zava-drehetra manomboka amin'ny fisafidianana fantsom-pahitalavitra ka hatramin'ny famandrihana serivisy amin'ny efitrano ary fandaminana fotoana hitsidihana spa ary hilomano ao anaty dobo. Raha tsy misy ny teknolojia dia misafidiana hotely hafa.
Rehefa miditra ao amin'ny efitrano ianao dia zahao ny kovetabe fandroana sy fandroana ahitra ho an'ny ahitra. Raha mahita ianao dia alao antoka fa tsy mandeha tongotra tsy mitondra tongotra mihitsy ianao. Raha toa ka miverimberina ny fizahana haingana ny dian-tanan'ny rantsan-tànana sy ny volo ao amin'ilay fitoerany, dia miantso haingana any amin'ny Front Desk miaraka amin'ny fangatahana efitrano voadio.
Vohay ary ampiasao ny fitahirizan-tànanao manokana mba hamafana ny jiro, kitapo varavarana, takelaka sy seza ary remote.
Aza mampiasa ny vera; ny filokana azo antoka indrindra dia ny fampiasana vera plastika nofonosina tsirairay na farafaharatsiny sasao amin'ny savony sy rano ny vera alohan'ny hampiasana azy.
Ny siny gilasy dia mety ho lovia Petri ho an'ny bakteria. Aza mampiasa azy! Antenaina fa nitondra ny kitapo plastika anao ianao - ampiasao izany rehefa mitsidika ilay milina gilasy ianao. Zahao ny masinina alohan'ny hampiasanao azy, mety hahita peratra maivana na menaka indostrialy manodidina ny fitifirana ranomandry ianao. Raha manao izany ianao dia hadinoy ny masinin-dranomandry ary mankanesa any amin'ny efitrano fisakafoanana hihinana ranomandry.
Tehirizo ao anaty kitapo plastika anao daholo ny entanao (borosy nify sy volom-bolo, sisiny sns) ary avelao ao anaty valizinao; esory izy ireo rehefa ilaina izany ary soloina ao amin'ny habaka misy anao.
Raha mbola misy ny korontana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny (manomboka amin'ny faran'ny fandriana sy ny fehiloha, ka hatrany amin'ny ondana sy pad naoritra) - esory avy hatrany… Ataovy ao anaty zorony ny fatiny rehetra, akimpeo ny varavarana ary sasao ny tananao.
Zahao ireo takelaka sy ireo ondana. Raha tsy madio izy ireo dia antsoy ny fikarakarana trano ary angataho amboara vaovao. Ny dingana mitovy amin'ny lamba famaohana. Raha toa ka efa niasa aza izy ireo dia avereno mody any an-trano izy ireo ary makà fanoloana madio.
Mitondrà tsifotra famonoana otrikaretina ary ampiasao eo am-pandriana, ary koa firakotra sy ondana ambony ary / na ento ny jiro UV anao ary ampamirapirato eraky ny efitrano.
Raha tsy manome tobin'ny famonoana otrikaretina ny trano fandraisam-bahiny, dia ampiasao ny tsimokaretina famonoana otrikaretina na ny lysol handi-wipe anao hanadiovana ny valizy alohan'ny hisokafany.
Mba hamaritana raha misy vokatra mandaitra amin'ny mikraoba toy ireo izay mahatonga ny Covid-19, avereno jerena ny mari-pamantarana vokatra ary alao antoka fa milaza izy io hoe: «Fangatahana pathogen virus mivoaka vaovao eken'ny EPA», na karohy ao amin'ny tobim-pahalalana voasoratra anarana momba ny vokatra.
Akanjo mandeha. Arovy ny akanjo notetezinao nitokana tamin'ny akanjo hafa. Raha manana ny teti-bola ianao dia alefaso any amin'ny serivisy fanadiovana valet raha vao tonga ianao. Raha tsy mety aminao izany dia tazomy anaty kitapo plastika ny akanjo fitetezana, misaraka amin'ny zavatra hafa rehetra.
Fitantanana ny fahadiovana
Hotely maro no nanampy mpitantana vaovao amin'ny lisitry ny mpiasa mitondra ny lohateny hoe Hygiene Manager ary ity olona ity dia tompon'andraikitra amin'ny fiofanana momba ny fiarovana sy fidiovana ho an'ny mpiasa, ary koa fitandroana tontolo azo antoka sy mahasalama ho an'ny vahiny. Ny hafanan'ny mpiasa dia horaisina alohan'ny isam-bidy ary maro no takiana amin'ny fitaovam-piarovana amin'ny fotoana rehetra. Ny toeram-pialantsasatra sasany dia tsy mamela ny mpiasa hanao ny akanjony avy any am-piasana ary hampitombo ny fiarovana sy ny fikajiana protokol avy amin'ny mpamatsy.
Mba hitoerana ny trano fandraisam-bahiny manalavitra ny fiaraha-monina dia mametra ny fidirana amin'ny dobo filomanosana, fandaharam-potoana manokana amin'ny fotoana voatondro spa, ary mitaky famandrihana mialoha ho an'ny kianja tenisy, taranja golf ary kojakoja hafa. Raha misy hotely manolotra vahiny amin'ny bisikileta, seza amoron-dranomasina ary elo, dia hadio izy ireo alohan'ny sy aorian'ny fampiasana tsirairay avy.
Tontolo vaovao madio be herim-po
Raha arahana ny kaonty fahadiovana, dia ho salama sy ho voaro amin'ny ezaka ny tsirairay (anisan'izany ny mpiasa, ny vahiny ary ny mpivarotra). Ny olana? Ny teti-bola hanombohana ny rafitra sy ny fombafomba ary ny finiavana hitazona ireo lahasa amin'ny sehatra fiasa.